၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆုရွေးချယ်နိုင်ရေး ဖတ်ရှုစိစစ်ရမည့် စာအုပ်များ လက်ခံလျက်ရှိရာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်တွင် စာအုပ် (၁၇၄) အုပ် ထပ်မံရရှိ
၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက် အမျိုးသားစာပေဆု စိစစ်ရွေးချယ်ရာတွင် ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရေး ၂၀၁၉ ခုနှစ် အတွင်း ပထမအကြိမ်ထုတ် စာအုပ်များကို စာပေဆုများ အုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုကော်မတီရုံး စာပေဗိမာန်သို့ ပေးပို့ကြရန် စာရေးသူ၊ ပုံနှိပ်သူနှင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသူများနှင့် ပြည်သူများကို နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာများ၊ မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြားသတင်းဌာနများမှတစ်ဆင့် မေတ္တာရပ်ခံ နှိုးဆော်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ မေတ္တာရပ်ခံချက်အရ စာရေးသူ၊ ပုံနှိပ်သူနှင့် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိသူတို့က ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွင်း ပထမအကြိမ်ထုတ် စာအုပ်များကို တစ်မျိုးလျှင် (၄) အုပ်နှုန်းဖြင့် စာပေဗိမာန်ရုံးသို့ လာရောက်ပေးပို့လျက်ရှိရာ စာပေဗိမာန်ရုံးက လက်ခံရရှိကြောင်း ပြန်ကြားပေးခြင်း၊ www.moi.gov.mm/ppd Web Site တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း၊ ရရှိလာသည့် စာအုပ်များကို အမျိုးသားစာပေဆု ရွေးချယ်ရေးအတွက် သတ်မှတ်ထားသော ဘာသာရပ် (၁၆) မျိုးအလိုက် ဘာသာရပ်များ ခွဲခြားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း စသည်တို့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ (၁၀) ရက်တွင် စာအုပ် (၁၇၄) မျိုး ထပ်မံရရှိခဲ့ပါသည်။ ယင်းစာအုပ်များ စာရင်းကို အောက်ပါအတိုင်း စုစည်းဖော်ပြ အပ်ပါသည်-
(၁) ချိုမြိန်သောအခါးနှင့် ရသဝတ္ထုတိုများ - ဝန်းရံခ၊ (၂) မျက်ရည်ကျဖို့လိုသလားနှင့် ဘဝရသစာစုများ - အောင်ကောင်းမွန်၊ (၃) ချစ်သားဆရာလောင်းသို့ ပေးစာများ - နိုင်သောင်းထွဋ်၊ (၄) ခုန်နေတဲ့မျဉ်း ခေတ်ပြိုင်စာပေဆောင်းပါးများ - စောနဒီ (မြစ်ကြီးနား)၊ (၅) ရန်သူများနှင့် မကွဲမကွာ ခေတ်ပြိုင်ရသ ခံစားမှုများ - လင်းဇော်ဦး၊ (၆) ၃ မိနစ် ရသစာများ - မင်းကျော်စွာ၊ (၇) အမေးအဖြေ သုတအထွေထွေ - ဒေါက်တာမခင်မြင့်၊ (၈) ဂေဟဗေဒစနစ်ဖြင့် ဝါးပင်များရှင်သန်ဖွံ့ဖြိုးစေဖို့ - ရတနာစိုး (အမျိုးသား စာပေဆုရ)၊ (၉) ဈေးသည်ကြီးကျွန်တော်၏ ကားပေါ်ကဝတ္ထုများ - ဂေါယာမြေစောဝင်း၊ (၁၀) တာဝန်သိစိတ် တာဝန်ယူစိတ် - မောင်စည်သူ (အဖျောက်)၊ (၁၁) မြို့ပျက်ညရဲ့ အော်ပရာ (ကဗျာရှည်) - ဝဇီရာဒီဖိုး၊ (၁၂) ဖိုးဝရုပ်ကလေးကဗျာများ - နန္ဒာမိုးကြယ်၊ (၁၃) ၂၀ ရာစု မြန်မာကဗျာများ ပြောင်းလဲ ဖြစ်တည်လာပုံ - ဒေါက်တာဇော်နိုင်၊ (၁၄) အလင်းစကားဖွဲ့သီ မျက်ဝန်းဆီမှ - ဒေါက်တာနီလာသိန်း (လင်းရောင်သစ်)၊ (၁၅) ပုံတောင်ပုံညာရပ်ဝန်းဆီက ယောရွှေပြည် - ကိုယော (ဘောဂဗေဒ)၊ (၁၆) ရေတက် - ဟိန်းလတ်၊ (၁၇) ဗုဒ္ဓဝန္ဒ ကလေးကဗျာ - မောင်ဧရာ၊ (၁၈) မေတ္တာပန်းခင်း ကလေးကဗျာ များ - အောင်စည်နေမျိုး၊ (၁၉) မြန်မာ့ရာဇဝင်ထဲက သူရဲကောင်းများ - အောင်စည်နေမျိုး၊ (၂၀) ဖြစ်ရပ်မှန်ထဲက အတွေးအမြင်များ - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)၊ (၂၁) စာရိတ္တ သတ္တိ - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)၊ (၂၂) စာရိတ္တပြိုင်ပွဲ - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)၊ (၂၃) ဘဝနှင့်ရင်းရသော အတွေးအမြင် များ ပေါင်းချုပ် - မေတ္တာရှင် (ရွှေပြည်သာ)၊ (၂၄) မန်ခါးတောင်ကြောတိုက်ပွဲ - IO.CRANE၊ (၂၅) အိပ်မက်အဗိမာန် - ကဘော်မြေမောင်မောင်၊ (၂၆) အညာအလှ ရွာအလှ ကျေးလက်ရနံ့ကဗျာများ - မောင်လွယ်အိတ်၊ (၂၇) မာလာဖူးငုံ ရနံ့စုံ ကလေးကဗျာများ - ဇာမဏီ (ပုဂံ)၊ (၂၈) တိတ်တဆိတ် ပျံသန်းနေတဲ့ လိပ်ပြာရသစာတမ်းငယ်များ - ချစ်ခိုင်စံ (ဘီအီးဒီ)၊ (၂၉) မန္တလေးမြို့က သူတို့အကြောင်း - စိုးဝင်းဗိုလ် (အရာတော်)၊ (၃၀) အေးရိပ်သာယာ ကလေးကဗျာ - မောင်နိုင်လင်း (ကောလင်း)၊ (၃၁) သဘာဝနည်းဖြင့် ကျောက်ကပ်ကျောက် ဖယ်ရှားနည်း အလွန်အစွမ်းထက်သော လက်တွေ့ကုထုံးနည်း - ဦးသန်းဝင်း (အာဆီယံအင်ဂျင်နီယာ)၊ (၃၂) စီးပွားရေးကျရှုံးမှုအတွက် ပညတ်ချက် (၁၀) ချက် - ထင်ဇော်မှူးသင် (မြန်မာပြန်)၊ (၃၃) မလွမ်းစကောင်း လွမ်းစကောင်း ရှေးရှေးက မန္တလေး - ကိုပေါက် (မန္တလေး)၊ (၃၄) ဘုရင်ဖြစ်မယ့် လက်ညှိုး - ကောင်းပြည့်သော်၊ (၃၅) မက္ကာဒေးမီးယား (Macadamia) စိုက်ပျိုးဝင်ငွေတိုး ဒေသဖွံ့ဖြိုး - ရတနာစိုး (အမျိုးသားစာပေဆုရ)၊ (၃၆) သော်တာပျိုရဲ့ ပန်းဉယျာဉ် - လမင်းလေး (အညာမြေစလင်း)၊ (၃၇) ကြုံတွေ့သမျှ ဘုံဓလေ့ဘဝဇာတ်လမ်းစုံ - ဗိုလ်ချိုမြေ တင်တင်ဝင်း၊ (၃၈) အခက်ဆုံးဟာ … လူနှင့် ကဗျာ အနုပညာ စုစည်းမှု ၈၅ - ရွှေဘိုတင်အောင်၊ (၃၉) မတောင်းဘဲပေးတဲ့ ကိုယ့်ရဲ့လက်ဆောင် - ခေတ်ရှေ့ဆောင်၊ (၄၀) ကင်ဆာရောဂါနှင့် မြန်မာအစားအစာ - ဒေါက်တာလှကြည် (အာဟာရဆရာဝန်ကြီး)၊ (၄၁) ပွင့်သစ်ပန်းမို့ လန်းပါစေနှင့် အခြားကဗျာများ - ပုလဲဖြူ (ငါ့သရောက်)၊ (၄၂) လူသားဆန်မှု ဖြူစင်သော နှလုံးသားနှင့် လမ်းတစ်စင်းကို ထမ်းလျှောက်သူ - ထက်နိုင် (တလုပ်မြို့)၊ (၄၃) တိမ်ခြွေမိုး - နှင်း (မာယာ)၊ (၄၄) ဇွဲကပင်တောင်ပေါ်က သူရိယနေဝန်းနီနီ - ပန်းတနော်ခင်မောင်မြင့်၊ (၄၅) တစ်ဘဝဒဏ်ရာ - ဆေးဆေ၊ (၄၆) ထာဝရအတွက် ပထမခြေလှမ်း - ရာပြည့်၊ (၄၇) မြန်မာနိုင်ငံအမြန်ဆုံးတိုးတက်အောင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြင့် မည်သို့ ဆောင်ရွက်ကြ မည်နည်း - မြက်ရိုင်း၊ (၄၈) ဖားကန့်ချိုချို ရသဝတ္ထုတိုစု - ရွှေအိမ်သူ၊ (၄၉) The Red Flower – AW. Khin Myat Phone၊ (၅၀) စရိယာပိဋကအဋ္ဌကထာနိဿယသစ် (ဒုတိယတွဲ) - ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တထေရိန္ဒ၊ (၅၂) စရိယာပိဋကအဋ္ဌကထာနိဿယသစ် (ပဌမတွဲ) - ဒေါက်တာဘဒ္ဒန္တထေရိန္ဒ၊ (၅၃) သုဝဏ္ဏဘူမိခေတ် သာသနာ - အရှင်ရာဝိက (M.A Buddhism)၊ (၅၄) နှင်းတောင်တန်းက ပန်းဉယျာဉ် - ဉာဏ်ဝေ (မြစ်သာမြေ)၊ (၅၅) ဦးတင်မြင့်၏ ပုံရိပ်များ - ဦးတင်မြင့်၊ (၅၆) သီလနိမန္တနခေါ် သီလတရား၏ ဖိတ်ခေါ်သံ - နေထွန်း၊ (၅၇) သင့်ကျန်းမာရေးအတွက် ရှောင်ရန်အမူအကျင့်များ - ဒေါက်တာခင်မိုးမိုး၊ (၅၈) ဟိမဝန္တာမြေကမ္ဘာ၏ ပျော်ရွှင်ခြင်းနိုင်ငံ ဘူတန် - ဒေါက်တာတင်ထွန်းဦး၊ (၅၉) ပျံသန်းခြင်း မိုင်တိုင်များ ခေတ်ပေါ်ကဗျာစုစည်းမှု - ပြည့်ဖြိုးသီ၊ (၆၀) နှလုံးသားဉယျာဉ်ကဗျာများ - ညွန့်လှိုင်ဝင်း (ကွမ်းခြံကုန်း)၊ (၆၁) မြောက်ဦးကို ရာဇဝင်ထဲမှာ ထားခဲ့ရတော့မှာလား - ရက္ခ၊ (၆၂) အတ္တလန္တိတ် တစ်ဖက်ကမ်းမှ ပစိဖိတ်ကမ်းသို့ - မြင့်မိုရ်ဆွေ၊ (၆၃)ရခိုင်ရှေးဟောင်းထီးနန်းမြို့ပြများ ကွင်းဆင်း သုတေသန - မင်းပြားမင်းသိန်းဇံ၊ (၆၄) နှလုံးသွေးနှင့် ရင်း၍ - ကာတွန်းကြည်ဝင်း၊ (၆၅) ကံ၏စေရာ - ကာတွန်းကြည်ဝင်း၊ (၆၆) မြူမှောင်ကင်း၍ ချစ်ခြင်းတည်စေ - ကာတွန်းကြည်ဝင်း၊ (၆၇) မျှော်လင့်ခြင်း ၏ အဆုံးမဲ့ရင်ကွဲနာ - ကာတွန်းကြည်ဝင်း၊ (၆၈) တံခွန်ဉီးမင်္ဂလွန်းအောင်စကြ်ာစေတီသမိုင်း - မင်းသန်းစိုင် (ကွမ်းခြံကုန်း)၊ (၆၉) နှင်းပန်းရုံ - ပြေ၊ ဆေး-၂၊ (၇၀) လူတွေဘာလို့ နောက်ရွှေ့ချင်နေရတာ လဲ - ခင်စုစုစံ၊ (၇၁) မြေပဲပါရဂူ ဂျော့ချ် ဝါရှင်တန်ကာဗာ - ခင်စုစုစံ၊ မြနှင်းရည်ရှိန်၊ (၇၂) အတွေးများမှ သည် လက်တွေ့လုပ်ဆောင်မှုဆီသို့ - မြနှင်းရည်ရှိန်၊ (၇၃) သင့်ကိုယ်သင် ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မည့် လျှို့ဝှက်ချက်အန်နီယယ်ဂရမ် - မြနှင်းရည်ရှိန်၊ (၇၄) သာဝါးလို့ထွေး ကွမ်းယာသမိုင်း၊ ကွမ်းယာသုံး ပစ္စည်းနှင့် ကွမ်းယာစားသုံးမှုစစ်တမ်း - ကိုမြန်မာ၊ (၇၅) ဇလပ်နီ - ပျိုး၊ (၇၆) ဝမ်းကျူအိတ်ဖိုး - မယ်ကျွိ (မြန်မာပြန်)၊ (၇၇) ဘော်တွင်းမိုင်း၏ ဆေးရောင်စုံဘဝပုံရိပ်များ (ဝတ္ထုတိုစုစည်းမှု) - ဆင်တဲဝမြတ်မင်း၊ (၇၈) အန်ကောဝပ် ဖနွမ်းပင် နန်းတော်နှင့် ခမာတို့တိုင်းပြည်၊ နေထွတ်ဝတ္ထုတိုများ - နေထွတ်၊ (၇၉) နေထွတ်ဝတ္ထုတိုများ - နေထွတ်၊ (၈၀) တိမ်ပန်းရုံကလေးကဗျာများ - မောင်နေခြည် (ပြည်)၊ (၈၁) မုဒိတာနိဒါန်း ပန်းအင်္ကာကဗျာများ - မောင်လွန်းမြိုင် (ပင်လယ်ဘူး)၊ (၈၂) ဓမ္မစကူးလ်ပွင့်ငုံဖူး - ပျော်ရွှင် (ဆိပ်ဖြူ)၊ (၈၃) ပုဂံချစ်သူ - ရေနံ့သာ ဝင်းမောင်၊ (၈၄) A RAKHINE CHRONICLE – Dr.Saw Mra Aung၊ (၈၅) ခရုသေရေကြည်တောနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ - မောင်ဆောင်း (မုံလှ)၊ (၈၆) အဘ - မိုးကျော်စိုး (မကွေး)၊ (၈၇) သိတဲ့မြင်တဲ့ အတိုင်း - သိုက်စိုးထွန်း (နတ်ရွာ)၊ (၈၈) ပန်းဟေဝန် - ကာတွန်းကြည်ဝင်း၊ (၈၉) လက်ရှိကမ္ဘာ့ ဓာတုကင်းလွတ် အော်ဂဲနစ်ဉယျာဉ်ခြံ သီးနှံစိုက်ပျိုးရေး - နေရောင် (စိုက်ပျိုးရေး တက္ကသိုလ်)၊ (၉၀) နေ၏ဖွားဖက်တော်များနှင့် နေစကြာဝဠာဘယ်မှာဆုံးမလဲ - ဘူမိလုလင်၊ (၉၁) ရွက်ဝါတွေ ပြန်စိမ်းလေမည်လားနှင့် ရသစာတမ်းငယ်များ - ပိုးသားရွှေ၊ (၉၂) ဆိပ်ဖလူးဝေစ ညနေခင်းတွေ - ပန်းငုဝါဝါ၊ (၉၃) မြန်မာ့စာပို့တံဆိပ်ခေါင်းများ - ကျော်မြင့်မောင်၊ (၉၄) သားနဲ့သမီးအတွက် ဖေဖေ့နှလုံးသွေးစက် - အကြီးကိုကို (ကသာ)၊ (၉၅) တောင်တန်းများရဲ့ မနက်ဖြန် - သဉ္စာလှိုင် (လားရှိုး)၊ (၉၆) မတူကွဲပြားလမ်းကြောင်းများ မြန်မာနှင့် မြောက်ကိုရီးယား - မင်းအောင်မင်း၊ (၉၇) မြတ်ဗုဒ္ဓဒေသနာခြေရာဖွေရှာ မဇ္ဈိမမှာ - မောင်ကောင်းမြင့်၊ (၉၈) မြန်မာနိုင်ငံ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံဆောင်းပါးများ (၂၀၁၄-၂၀၁၉) - လှဆန်း (79-B.Ag) စိုက်ပညာရှင် (ခ) မျိုးမြင့်ဆန်း၊ (၉၉) ဧရာဝတီစောင့်ဖမ်းသူနှင့် မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုတိုများ - မိုးကျော်စိုး၊ မကွေး၊ (၁၀၀) အမြင့်ပျံ မိုးစိုငှက်များ - ခင်သန္တာ၊ (၁၀၁) ဓနုကြေးမုံ - မင်းလွင်ဦး (အောင်ပန်း)၊ (၁၀၂) တော်လှန်ရေးမိုးကောင်းကင်ထက်မှ ကြယ်နီ - ပုသိမ်အောင်သန်းဉီး၊ (၁၀၃) BRI ပုလဲသွယ်မဟာဗျူဟာ နှင့် ပထဝီနိုင်ငံရေး - မင်းအောင်မင်း၊ (၁၀၄) ကဗျာလှေ - စဆနိုင်၊ (၁၀၅) ဘဝဖြစ်တည်မှု အနုပညာ - စိန်လင်း (ခွဲစိတ်နှင့်ကင်ဆာ)၊ (၁၀၆) ပန်းနုရောင်အိပ်မက်အလွမ်းအက်ဆေး - ရွှေဒါးမောင်လေးရည်၊ (၁၀၇) စီးပွားဖြစ် နဂါးမောက်စိုက်ပျိုးခြင်းအတွေ့အကြုံများ - ငွေတိုး၊ (၁၀၈) ဘုရားသခင်နှင့် ကြွေအန် ကစားသူများ - မောင်ခိုင်လတ်၊ (၁၀၉) မြား၏အလင်္ကာ - ကျောင်းကုန်းဧည့်မှူး၊ (၁၁၀) ရှေးမြန်မာတို့၏ လက်မှုလုပ်ငန်းများမှသည် လွတ်လပ်ရေးခေတ်လွန် စက်မှုလုပ်ငန်းများဆီသို့ - သိပ္ပံစာရေးဆရာ ကိုကိုအောင်၊ (၁၁၁) ဂြိဟ်ကမ္ဘာနှင့်အာကာသ (EARTH & SPACE) - စိုင်းဝီရလင်းခံ့၊ (၁၁၂) အစွမ်းထက်သော ချည်မန်းကွင်းယတြာများ - ဆရာဉီးအုန်းဟန်၊ (၁၁၃) မြန်မာတို့၏ပုဂံနှင့် အခြားကဗျာများ လက်ရွေးစင်ကဗျာ ၁၀၀ - စလင်းငွေစိုး၊ (၁၁၄) ကာရန်လမ်းက ပန်းဝတ်ရည် - စလင်းငွေစိုး၊ (၁၁၅) ဝေဒနာနိုင်ငံထဲက ခံစားမှုစာစုများ - မောင်မြုတေ၊ (၁၁၆) မဟာဂီတဉယျာဉ်နန်း အဖွင့် - ရွှေကူနန်းနွဲ့နွဲ့၊ (၁၁၇) ဒေါင်းအိပ်မက် - ကျော်ထက်ထွန်း (မြန်မာပြန်)၊ (၁၁၈) ချိုး (ပွင့်) ကလေးချော့တေး - ပါမောက္ခဒေါ်ရှိန်းပိုင်၊ (၁၁၉) လေထဲကပြာမှုန့်တွေ - ခင်မြင့်အောင်၊ (၁၂၀) တိမ်ပျို တစ်စင်းနဲ့ပန်းပင်လယ် - အောင်ထိပ်၊ (၁၂၁) သိုးစိမ်းတစ်ကောင်ဖို့ မြက်ခင်းနှင့် မဂ္ဂဇင်းဝတ္ထုရှည်များ - အောင်ထိပ်၊ (၁၂၂) ဘဝဗိသုကာ (ကဗျာများ) - ယိန်းဝဏ္ဏစိုးဝင်း (တိုက်ကြီး)၊ (၁၂၃) ခေါ်သံခါးခါး ရန်ကုန်ရေ ငါ ပြန်လာပြီ - မေဇွန်အေး၊ (၁၂၄) စာပေသစ်ပင် စိမ်းလန်းရှင်စေ စာပေအကျိုးပြုကာရန် ကဗျာ (ရဝ) - မြတ်သုတ (မြန်မာစာ)၊ (၁၂၅) ဝ,ဝ လုံးလေးဝိုင်းဝိုင်းရေးနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ - အကြီးကိုကို (ကသာ)၊ (၁၂၆) ချင်းတွင်းဒေသ ဖောင်သမားဘဝနှင့် အတွေ့အကြုံစာမျိုးစုံများ - ကျော်သောင်း (ဘုတလင်)၊ (၁၂၇) တိုင်းရင်းသားလူမျိုးတို့၏ ဓလေ့ထုံးစံများ - သိန်းထွန်း (မြဝတီ)၊ (၁၂၈) အမုန်းခရီးနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ - ကိုနေ (ကောလင်း)၊ (၁၂၉) ကိုလိုနီခေတ် မြို့အုပ်ကြီးတစ်ဦး မှတ်တမ်း - အနောက်တံခါးမှူး မောင်မှူး၊ (၁၃၀) နှလုံးသားလေးဆယ် - ခင်မေခ၊ (၁၃၁) ရဟန်း (လောကကိုအလင်းပြ၍ သံသရာမှ လွတ်မြောက်စေသူ) - ဒေါက်တာတိုးလှ၊ (၁၃၂) အမေရယ် … လေနှင့် အခြားကဗျာများ - ငြိမ်းဇော်လွင်၊ (၁၃၃) လူစွန့်စားမင်းညိုနှင့် အမှတ်တရဝတ္ထုတိုများ - ဝဏ္ဏမိုးအောင်၊ (၁၃၄) ကဗျာဂီတ ဘဝစာပေ - ဒေါက်တာညိုအောင်၊ (၁၃၅) ပျူဟူသည်မှာ …. နှင့် အခြားဆောင်းပါးများ - မာန်သစ်ငြိမ်း (ရှေးဟောင်းသုတေသန)၊ (၁၃၆) သမိုင်းခြေရာ တို့ဖွေရှာ - ဒေါက်တာသက်လွင်၊ (၁၃၇) စွဲထင်ရစ်ကျန် ရင်ထဲကပုဂံ - ဇော်လွင်ဦး (ဟင်္သာတ)၊ (၁၃၈) စိတ်ကြိုက်ဇာတ်ကား (၁၀၀) - ရုပ်ရှင်ကြည့်ပရိတ်သတ်တစ်ဦး၊ (၁၃၉) ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဉပေဒနှင့် ဒီမိုကရေစီ - ဒေါက်တာတိုးမြင့်၊ (၁၄၀) ရက်ရာဇာနှင့် မြန်မာ့ပြက္ခဒိန် - ရွှေကျွန်း - ကျော်လူ၊ (၁၄၁) မေတ္တာရင်ခွင် ကလေးကဗျာများ - ဇာနည်၊ (၁၄၂) အစဉ်သဖြင့် ရင်နင့်အောင်မွှေးနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ - တင့်ထွန်း (ချောက်)၊ (၁၄၃) ခိုင်မာခြင်းစာမျက်နှာနှင့် ရသကဗျာများ - ပန်းချီညို (ပခုက္ကူ)၊ (၁၄၄) အိုလံပီယံ စကားပုံ - နေနိုင် (ပခုက္ကူ)၊ (၁၄၅) သည်မိုး သည်မြေ သည်အဖေနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ - မဂေါ်ဇီ၊ (၁၄၆) တန်ဖိုးရှိတဲ့လူနှင့် ရင်တွင်းစကား - ဘထွန်းအောင်၊ (၁၄၇) မြန်မာ့မြေဖွား တစ်သုံးငါးနှင့် တိုင်းရင်းသားရိုးရာ ကလေးကဗျာများ - သန့် (ပုလဲ-ပညာ)၊ (၁၄၈) မြို့ရိုးကလေးရဲ့ ကိုယ်သင်းနံ့ ထက်ဘုန်းအောင်၊ (၁၄၉) ရွက်ဖျင်တဲအခိုးခံလိုက်ရပြီ ရသစာတမ်းစုစည်းမှု - နိုင်မြင့်၊ (၁၅၀) ကျင့်ဝတ်တော အလယ်မှာ (ရသစာစုများ) - ကျော် (မြန်မာစာ)၊ (၁၅၁) ဒြပ်မဲ့ယဉ်ကျေးမှု အမွေအနှစ် မြန်မာ့သင်ဖြူးဖျာလုပ်ငန်း - ထိန်လင်း (မန်းတက္ကသိုလ်)၊ (၁၅၂) ရန်ကုန်မြို့တော် ပန်းချီပြပွဲများ (၂၀၁၈-၂၀၁၉) - ကိုဦးမောင် (တက္ကသိုလ်)၊ (၁၅၃) ရင်ထဲက ဆူးတစ်ချောင်းနှင့် အတွေးအမြင်စာစုများ - အရိပ်စစ်၊ (၁၅၄) နှလုံးသားစစ်စစ်ဖြင့်သာ - ကောင်းကင်မေ (စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်)၊ (၁၅၅) ချစ်၍လှသူနှင့် ရသဝတ္ထုတိုများ - အိမ်ခေတ်မှူး၊ (၁၅၆) ကမ်းဆင့်လက်မွန်ဝတ္ထုတိုစာစုများ - သျှီအင်ကြင်း၊ (၁၅၇) ဤမှန်သောသစ္စာစကားကြောင့် - ကြူကြူသင်း၊ (၁၅၈) မဟာစီ ပေတူး - ကောင်းဆက်ချစ်ပိုင်၊ (၁၅၉) လိမ္မော်ရောင်ရက်စွဲများ - လေးသူစံ၊ (၁၆၀) မေတ္တာရေဆန်နှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ - မိုးခရေ (ရွှေကျင်)၊ (၁၆၁) ကောင်းကျိုးဝေဖြာ စာပဒေသာ - ဒေါက်တာ တင်အောင်ရွှေ (သုတေသီ)၊ (၁၆၂) အတွေးအမြင် ရတနာ - နေမင်းစိုး၊ (၁၆၃) အိပ်မက်မျှော် လမ်း မြန်မာရနံ့ကဗျာများ - မောင်သူ (ကောလင်း)၊ (၁၆၄) ဖြူစင်အမြွှာကလေးကဗျာများ - မိုးနောင် (ကောလင်း)၊ (၁၆၅) လိုက်လျောညီထွေ ကျင့်တတ်စေနှင့် အခြားဆောင်းပါးများ - အောင်ကြည်ညွန့် (တက္ကသိုလ်)၊ (၁၆၆) ခန္ဓာကိုယ်၌ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိသော ရောဂါမျိုးစုံအကြောင်း သိကောင်းစရာ - ဒေါက်တာခိုင် (ဆေး-၂)၊ (၁၆၇) ချိုးငှက်တို့၏ အိမ်ပြန်ခရီးနှင့် အခြားဝတ္ထုတိုများ - ရာမညဖိုးလပြည့်၊ (၁၆၈) Research Journey Through Bronze Aye Culture of Myanmar – Dr San Win (Archaenlogy)၊ (၁၆၉) နှလုံးလှမီးအိမ်ရှင်နှင့် ပြည်သူ့အကျိုးပြုဝတ္ထုတိုများ - ဇင်ပိုင်ဖြိုး (ကံမ)၊ (၁၇၀) ကြယ်အလင်းနဲ့လှရအောင် ကလေးကဗျာများ - မြေလတ်မောင်မြင့်သူ၊ (၁၇၁) တောဘူတာရုံလေး ကဗျာပေါင်းချုပ် - တောင်တွင်းမောင်သင်းကျော်၊ (၁၇၂) ကြယ်ကလေးအလိမ္မာ ကလေးကဗျာများ - မင်းချမ်းမွန်၊ (၁၇၃) မုဆိုးချည်တဲ့ကြိုး - မောင်အေးကို (ပေါင်းတလည်)၊ (၁၇၄) သားပျော်ပါတယ် အမေ - နွေး (သရက်)၊
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် မတ်လ ၂၇ ရက်ထုတ် အတွဲ (၇၃)၊ အမှတ် (၁၃) ပြန်တမ်းစာစောင်ကို စာပေဗိမာန်စာအုပ် အရောင်းဆိုင်များမှတဆင့် စတင် ဖြန့်ချိ
(၂၈- ၃ - ၂၀၂၀) ရက်ထုတ် ရွှေသွေးဂျာနယ် အတွဲ (၅၂)၊ အမှတ် (၁၃ ) (e-Book)